I-GameHub: Umtapo Wezincwadi Ohlanganisiwe Wayo Yonke Imidlalo Yethu | Kusuka kuLinux
Ngaphandle kwalokho abaningi abangakucabanga, Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux njengamanje ngisekelwa kahle ngefayela le- anhlobonhlobo emidlalweni yezimfanelo ezahlukahlukene, kufaka phakathi ikhwalithi yesithombe ehamba phambili nedumela. Lokhu, ngenxa yezinhlelo ezinhle kakhulu ezinjenge- I-Steam, phakathi kokunye okuningi, njenge I-GameHub.
Ngokuqondile, I-GameHub isicelo sokuthi phakathi kwezinto eziningi sisebenza njengeyodwa umtapo ohlanganisiwe wayo yonke imidlalo yethu, ngaphezu kokukuvumela ukubuka, ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa nokukhipha imidlalo emithonjeni ehambisanayo.
Njengamanje, kuwebhusayithi yayo esemthethweni, I-GameHub iyatholakala kufayela le- inguqulo ezinzile (master) inombolo 0.15.0-1 futhi ku- inguquko yentuthuko 0.15.0.35-dev. Izinhlobo ezizinzile zikhishwa lapho kufakwa izici ezintsha futhi kusebenza ngaphandle kwezinkinga ezaziwayo. Izinhlobo ezizinzile ngokuvamile aziqukethe okuningi kwezici zakamuva nezithuthukisi. Ngenkathi izinhlobo zokuthuthuka ze- I-GameHub Ziqukethe izici ezintsha nezithuthukisi ezingaphansi kokuhlolwa noma kokuhlolwa.
Ungena amafomethi wefayela ahlukile ezenza kube lula ukuqaliswa kwayo kokuhlukahlukene kakhulu Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux. Amafomethi wamanje angalandwa ".Deb, i-flatpak ne-appimage". Futhi, ingafakwa ngamakhosombe, amisiwe ngaphambilini, ngaphandle kwe- I-GNU / Linux Distro Pop! _OS, ngoba iyatholakala ukufakwa lapho.
1.3 Izithombe-skrini zohlelo lokusebenza olufakiwe
Ixhasa imidlalo engeyona eyomdabu kanye nemidlalo yendabuko yeLinux.
Isekela izingqimba eziningi zokuhambisana kwemidlalo engeyona eyomdabu, efana ne: Iwayini / iProton, iDOSBox, iRetroArch, neScummVM. Ivumela futhi ukwengeza ama-emulators wangokwezifiso.
Ixhasa i-WineWrap, okuyiqoqo lezinsimbi ezilungiselelwe ngaphambili zemidlalo esekelwayo.
Isekela imithombo eminingi yegeyimu nezinsizakalo: I-Steam, GOG, Humble Bundle, neHumble Trove.
Ikuvumela ukuthi ungeze (uphathe) imidlalo efakwe endaweni.
Kwenza kube lula ukugcina nokuphatha amaqoqo wakho wegeyimu angenayo i-DRM.
Kwenza kube lula ukulanda abafaki, i-DLC, nokuqukethwe kwebhonasi kuzingxenyekazi ezithile eziku-inthanethi.
Ekugcineni, phakathi kwezinye izinto, inika amandla ukubekwa kwezinhlelo zamafayela ezishintshashintshanayo (ukunqwabelaniswa kwesistimu yefayela). Ngakho-ke, ikuvumela ukuthi ufake, ukhiphe, usebenzise futhi usebenze i-DLC noma ama-Mods ngaphandle kokufaka amafayela wegeyimu nganoma yisiphi isikhathi. Njengoba imbondela ngayinye igcinwa ngokwehlukana futhi ayikuthinti okunye ukunqwabelanisa. Futhi ngendlela yokuthi, zonke izinguquko kumafayili wegeyimu zigcinwe enkombeni ehlukile futhi kulula ukubuyela kuyo.
Njengoba sishilo ngaphambili, ingafakwa ngezindlela ezahlukahlukene ngamakhosombe namaphakeji, ngezindlela ezilula, futhi ichazwe kahle kuyo iwebhusayithi esemthethweni. Okocwaningo lwamacala, olusithintayo, ukufakwa kwenziwa nge Isikhumulo (Console), kwi I-Distro MX Linux 19 (DEBIAN 10), lapho bekufakwa khona ipulatifomu yokudlala ye-Steam.
Inqubo yayimi kanje:
Lezi imiyalo yokuyala, kuvunyelwe ukungeza indawo esemthethweni, engeza ukhiye wokugcina, buyekeza uhlu lwamaphakeji azo zonke izinqolobane zamanje kanye faka i-GameHub kusuka endaweni yokugcina engezwe ngaphambilini.
Izithombe-skrini zohlelo lokusebenza olufakiwe
Note: Noma kunjalo I-GameHub Ngisibona kahle isikhathi sami somsebenzisi se- I-Steam, bese ulanda bese ufaka IProton 4.2 neProton 5.0, ngokusebenzisa I-Steam, azenzi kahle, yize ngineqiniso lokuthi, kufanele kube yinkinga phakathi kwe- I-Steam futhi yami I-GNU / Linux Distro, unganikeli I-GameHub.
Ngeminye imininingwane nge I-GameHub indawo yayo esemthethweni ingavakashelwa e- GitHub, noma hlola ezinye izindlela ngalo, njenge Lutris ukuze I-Linux ne o I-GOG, I-LaunchBox, Photon, I-Playnite ukuze Windows. Ngaphezu kokuthi I-Steam kuwo womabili amapulatifomu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «GameHub», uhlelo lokusebenza noma ipulatifomu yomthombo omuhle kakhulu evulekile noma evulekile, ebhalwe kuVala kusetshenziswa i-GTK + 3, yabalandeli be- Imidlalo ku-GNU / Linux, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-GameHub: Umtapo wolwazi onobunye wayo yonke imidlalo yethu
I-Dislocker, ithuluzi lokufinyelela izingxenye ezifakwe ngekhodi yi-Bitlocker kusuka ku-Linux